असफल नेतालाई रोनाल्डोले झै कहिले पन्छाउने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
असफल नेतालाई रोनाल्डोले झै कहिले पन्छाउने ?
६ असार २०७८ २ मिनेट पाठ
एक साता अगाडी पत्रकार सम्मेलनको क्रममा पोर्चुगलका खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पेयपदार्थ कोकाकोलाको एक जोडी बोतललाई क्यामेराको फ्रेमबाट हटाउँदा समग्र बजारमा कोकको बजार मूल्य चार अर्ब डलरले कम भयो।
जव व्यक्ति सफलताको शिखरमा पुग्छ, तब उसको स्वीकार र अस्विकारको प्रभाव कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदारण हो यो। सामाजिक सञ्जालमा ५५ करोड फलोअर भएका पोर्चुगलका स्टार खेलाडीको हंगेरीलाई हराएको उक्त दिनको प्यास कोकहैन, पानी पिउने सल्लाह दिँदै मेटे।
त्यो भयो फुटबलको कुरा। यता नेपाली राजनिति पनि कुनै खेलभन्दा कम छैन। खेल्न जाने पनि, नजाने पनि मैदानमा ओर्लिएका राजनीतिका खेलाडी दशकौदेखि मैदानबाट निस्कन मानेका छैनन्। रेफ्रीको भूमिकामा रहेका जनतालाई उनीहरु ‘जनार्दन’ भन्छन्। तर उनीहरु जनताका नियमभन्दापनि आफै निर्णायक भएर बसेका देखिन्छन्।
निर्णायकको भूमिकामा रहेका जनता पनि कैयौंपटक सही निर्णय गर्न चुकेको देखिन्छ। त्यसैले त होला समृद्धिका सपनाहरुमा ‘फल’ हान्नेहरुलाई पनि ‘रेडकार्ड’ देखाउन सक्दैनन। बरु अर्को पटक चुनावी ‘ग्रिन कार्ड’ देखाएर मैदानमा भित्राउदै नविकरण गरिदिन्छन्
त्यसो त उनीहरुले सही निर्णय कहिल्यै नगरेका भने होइनन्। तर कहिलेकाहिँ गरिएका ती निर्णय पनि फेल खाएको देखिन्छ। मुलुकको आवश्यक्ता भन्दै चुनाव हारेका पनि विभिन्न कुनाबाट मैदानमा छिर्दा उनीहरु मुकदर्शक बन्न बाध्य छन् ।
फुटबलमा रेफ्री ९० मिनेट निर्णायक भएजस्तै जनता निर्णायक हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भनेको मतदानको दिन हो। तर जनता त्यति बेला विभिन्न ‘वाद’ को चस्माले राजनीतिका खेलाडीलाई हेर्छन्। त्यही दोषी दृष्टिले मुलुकको समृद्धिमा धक्का लागेको वर्षौं भइसक्यो। यसैले अब आँखा खोलेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
रोनाल्डोले कोकको बोतल पन्छाएको केही दिनमै फ्रान्सेली खेलाडी पल पोग्बाले पनि ‘हेनेकेन’ बियर बोतललाई पन्छाएका थिए।आफुलाई मन नपरेको चीज नाफा घाटा नहरेरी पन्छाउन आँट चाहिन्छ । त्यो रोनाल्डो र पोग्बामा देखियो ।
तर यता जनताले असफल नेताहरुलाई कहिले पन्छाउने होला? अनि कोकको रंगजस्तो मन भएको नेतृत्वको ठाउँमा पानीजस्तो संग्लो मन भएको नेतृत्व कहिले छान्ने होला? त्यसको लागि पार्टीनै फेर्नु पर्छ भन्ने छैन । उम्मेदवार चयनमा ध्यान दिए पुग्छ । त्यसो त कोकलाई पन्छाएर रोनाल्डोले उठाएर देखाएको पानीको बोतल पनि कोकाकोला निर्माता कम्पनीले नै बनाएको पाइएको छ ।
प्रकाशित: ६ असार २०७८ १६:४२ आइतबार